Xa ukuhlangabezana Abazali: Njani Kungekudala Kakhulu Kamsinya kwi Budlelwane
Xa budlelwane ingaba kulungile ke, ngexesha abanye incopho nibe wenze isigqibo angenise zakho ezibalulekileyo ezinye nabazali bakho. Kodwa indlela kungekudala kakhulu kamsinya kuba intlanganiso abazali? Kukho izinto uyakwazi ukwenza qinisekisa ukuba intlanganiso uyaya kakuhle? Kukho izinto zakho ezibalulekileyo ezinye ayenze? Kukho ngokwenene akukho nto somelele impendulo njengoko ukuba xa kuba zakho ezibalulekileyo ezinye “bahlangana abazali”. Kukho nangona kunjalo, ezimbalwa izinto cinga: Musa angenise umntu ufuna casually dating nabazali bakho. Ukuba akunjalo, officially kwi ubudlelwane kunye umntu ke ukwazisa abazali basenokuba detrimental magama ngeendlela ezimbini: Xa Kufuneka Umlingane Wam Kuhlangana Abazali Bam? Nantsi Indlela Uxelele abo nikulungele nesinye isizathu kufuneka shouldn ukuba angenise yakho casual dating umhlobo wethu usapho ngu ngenxa ithumela confusing umyalezo umntu ukhe ubene dating. Siza okanye aren khange sibe casual? Ukuba ufuna ukugcina izinto casual ke parental isihloko ingaba esithi i-opposite loo. Kwaye ukuba ufuna ukufumana ezininzi ezinzima, parental intshayelelo ngu putting i-ekuthengelwa kuyo phambi horse. Musa scare yakho casual dating iqabane lakho kude. Nika budlelwane ixesha kuba budlelwane kuqala. Ingaba Yakho Dating Okulindelweyo Eliphezulu Kakhulu? Ukuba ufaka kwi ubudlelane ke xa igqiba ekubeni angenise zakho ezibalulekileyo ezinye ukuba abazali bakho kuxhomekeke kunye intentions kwaye seriousness kubudlelwane kwaye casualness yakho abazali. Abazali bam ingaba kodwa ezinzima. Ukuba ndiya kuzisa umntu ekhaya ukuya kuhlangana nabo baya alenze ndinguye ezinzima malunga umntu. Ukwazi oku, ndinga kuphela angenise umntu ukuba abazali bam ukuba ubudlelwane waba ezinzima kakhulu. Kwi ephikisana, mna zithe kwi-ubudlelwane abantu abantliziyo abazali bamele kakhulu ngakumbi casual. Ndandidibana nabazali babo xa budlelwane waba? iselwa entsha okanye casual nangona kunjalo isimemo ukuhlangabezana abazali bam akazange eyandisiweyo. Xa mna wachaza ukuba mna kuphela angenise boyfriends ukuba abazali bam xa budlelwane kakhulu ezinzima, ngamanye amaxesha offended umntu. Khangela Lokulima Episode ka-Master of Namnye xa Rachel umbuzo uthi Dev malunga kwintlanganiso yakhe Indian abazali.
Ukuba ke awkward, akunyanzelekanga ukuba ufuna ukwenza kwakho ukwenza nantoni na ukuze wena musa ufuna ukuyenza. Kodwa ke nje yenza kum bazive ngathi ufuna ukuba neentloni kum okanye into ethile. Jonga, ke ezahlukeneyo, kulungile? Ukuba ukhe ubene a mhlophe umntu kwaye nisolko dating umntu, kufuneka nje umnxeba abazali bakho baxelele, Heee, ndiza dating lo mntu, kwaye baya izinto ngathi, Oh, olukhulu. Manditsho mema naye phezu kwaye kutya kwakhe, njenge, chicken kwaye dumplings.
Cacisa Imiqondiso ke Ekunene Ixesha ukuhlangabezana Abazali Njani obandakanyekayo ingaba abazali bakho usapho? Baya uthando lwakho ezibalulekileyo ezinye kakhulu kakhulu phezu intlanganiso nabo? Ndafunda phambi kwexesha ngomhla ukuba umama wam kokuba kwezo meko “tshata wam partners”. Ukuba a guy waba ingakumbi handsome, ebukekayo okanye charismatic yena ingaba rave malunga naye. Ekuqalekeni bekuya kuba mkhulu ukuba wathabatha loo nzala eluthandweni lwam inzala. Kodwa ukuba okanye ngenye xa budlelwane waya sour ndava i-ezingaphezulu ilahleko. Ilahleko waba nangakumbi oluphakamileyo ukuba umnakwethu ange befriended kuye njengoko a basketball umhlobo. Wena musa ufuna usapho lwakho badger kuwe malunga a engalunganga breakup. Kutheni ayikwazanga KUFUNEKA ibonakale umsebenzi kunye ngoko ke–ngoko ke? Kwaye ukuba kukho iqabane lakho intlanganiso abazali, ke wena musa ufuna kuba ukwaphula phezulu nge lonke usapho ukuba okanye xa budlelwane siphela. Yimalini ingaba ungathanda abazali bakho? Ingaba iprojekthi efanayo amandla kwaye viewpoints okanye kukho a stark umahluko phakathi kwenu kwaye nabo? Ukuba kukho stark umahluko kungafuneka ngakumbi ixesha solidify yakho kubudlelwane phambi ukumiselwa abazali bakho. Kwi-dating kukho kuthenga-xesha. Zonke wachitha ixesha kunye ngu wachitha ixesha subconsciously ukuhlolwa umlingane wakho. Ingaba ungathanda nabo? Ingaba uziva ezilungileyo xa uqinisekile ukuba kunye nabo? Ungakwazi tolerate izinto wena musa ngathi? Ukuba angenise usapho lwakho kakhulu ngokukhawuleza kwaye ayithethi ukuba hamba kakuhle umlingane wakho ke inzala ibe nokuqala sway ngaphezu izakuba ukuba ubudlelwane kokuba sele kokuba ixesha solidify. Wazi Njani Wena Uthando Omnye Umntu? Ngoko ke, makhe ukucinga kufuneka iqwalasele zonke zeli kwaye yenze isigqibo lixesha ukuba angenise umlingane wakho ukuba abazali bakho. Nazi ezimbalwa iincam ukuba uqinisekise ukuba uyaya kulungile: Okulungileyo comment kwaye ndiyathemba aba ngabo eluncedo iincam. Musa xana kuza emva kwaye wabelane into isebenza. Molo Laura, andiqondi ukuba kukho kusenokuba ngumsebenzi omnye ubungakanani i kstars.
zonke mpendulo kuba lo mbuzo
Ndicinga ukuba oko ngenene kuxhomekeke ngoko ke, abaninzi imibandela. Umzekelo, ukuba ngaba basemazweni high school, ngoko ungafuna ukuhlangabezana abazali super phambi kwexesha kuba imvume nkqu umhla. Onjalo uya kuba xa ufuna kwi kakhulu esiqhelekileyo unqulo usapho. Xa usebenzisa i-omdala kwaye % teen mna nento yokuba ndithi iinyanga inokusetyenziswa endaweni elide okanye ngenye indlela emfutshane kuxhomekeke iimeko zenu. Lento a casual kick-boyfriend, okanye ezinzima boyfriend? Kuba abantu abaninzi iinyanga ngu isixa-mali ixesha luyafuneka ukuze nazi ukuba ufuna ngokwenene ngathi umntu okanye hayi. Rhoqo emva kwenyanga marko ndandisazi a boyfriend akusebenzi khange elungileyo fit nkqu ukuba ke ngoko wathabatha kum enye zimbalwa zidlulileyo ukubiza ukuba zonke ngaphandle. Ngokunjalo ukuba ndandisazi wayeyindoda elungileyo fit emva kweenyanga ezintathu ngoko ndinga qala kwi transition kwi ngaphezulu ezinzima mindset ukuba mna hadn ukuba sele. Mayela intlanganiso abazali bakhe zibuze izinto ezimbalwa: Ingaba uziva ilungele ukuba badibane nabo? Ukuba akunjalo, kutheni na? Ingaba kungenxa yokuba budlelwane ayi ilungile okanye kukho ezinye izinto ukwenza kuni reluctant ukuba ingaba elizimeleyo kubudlelwane? (I. e ulwimi imiqobo, ubuzwe, ezopolitiko, neeyantlukwano, njl. njl.) Ukuba ke yokugqibela ke ezi zizinto ukuxoxa kunye umlingane wakho phambi kwentlanganiso abazali. Mna wouldn ukuba uphephe okanye libazisa kwabo. Kanjalo, buza yakho boyfriend ukuba uninzi yakhe girlfriends ngokuqhelekileyo kuhlangana abazali bakhe. Mna ke kutsha nje ukubukela i-xesha Master of Namnye kwaye Dev waba lucacisa indlela in Indian iintsapho wena musa nje angenise wonke umntu ufuna dating ukuba abazali bakho bayakuthanda usombulula kwi-mhlophe iintsapho. Enye ngokuqinisekileyo uya kuba Muslim iintsapho. Ukuba siza kuzisa umntu ekhaya i ukungena kukuba thina kufuneka kokuqwalasela umtshato, kuya kufuneka ezinzima. Kodwa abaninzi iintsapho akukho ukungena ngaphaya, “heee abazali kuhlangana boyfriend yam”. Ngoko zama gauge yintoni intlanganiso abazali bakhe kuthetha wakhe ehlabathini. Mhlawumbi oko ngokwenene akukho nto omkhulu yaba, okanye mhlawumbi kungenxa. Ngokunjalo ukuba aren ukuba ikulungele kuba kuye kuhlangana abazali bakho kuba kakhulu ngaphaya njengoko ukuba kutheni. Kulula ukuba ukhathaza umntu okanye kuba misunderstood ukuba wena musa zichaza ukuba kutheni ke kakhulu kamsinya. Ndandidibana wam husbands abazali ngenene emva kwexesha kwi budlelwane bethu kodwa ke ngenxa yokuba waphila ngenene kude kwaye ngenxa intlanganiso nabo naziphina iziqinisekiso eziqukiweyo umtshato wenziwa kufutshane. Uzive ukhululekile-imeyili apha kum ngqo kwaye wabelane ngakumbi specifics yakho imeko ngoko ndinako kukunika ngakumbi ethile ingcebiso. Ezilungileyo comment kwaye umbulelo kuba reaching ngaphandle. Mna wabhengeza epically ubhideke dating survivor waguqukela Umfazi & Mom. Mna hetalia malunga bonke disconnects kwi-dating, zinika iingcebiso (ukusuka kwelinye icala) ukunceda icacile fumana isempilweni, ninoyolo, lasting budlelwane nabanye
Uthando, grief, Incoko, incoko igumbi free-tyala - okunokukhethwa kuko, intlungu, uthando Incoko →